DEG DEG:- Askari ka tirsanaa ciidanka NISA oo goordhaw lagu dilay magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Askari ka tirsanaa ciidanka NISA oo goordhaw lagu dilay magaalada Muqdisho
Wararka naga soo gaarayo magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in koox hubeysan ay goordhaw xaafadda Macalin Nuur ee degmada Dharkeenley ku dileen askari ka tirsanaa ciidanka nabad-sugidda qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya.
Askariga la dilay oo lagu magacaabi jiray Feysal Garasow ayaa la sheegay in dhowr rasaas lagu dhuftay xilli uu ku sugnaa xaafadda Macalin Nuur ee degmada Dharkeenley.
Dhinaca kale, kooxihii dilka u geystay askarigaasi ayaa la sheegayaa in islamarkiiba ay goobta isaga baxsadeen, waxaana markii dambe halkaasi soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa nabad-sugidda qaranka oo baaritaano ka sameeyay halkaas.
Illaa iyo hataan ma jirto cid baaritaankaasi lagu soo qabtay ama sheegatay inay ka dambeysay dilka askarigaas.
Si kastaba ha ahaatee, dilkaan ayaa kusoo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeysay dilalka qorsheysan ay si xowli ah ugu soo bateen magaalada Muqdisho, iyadoona dhowr jeer hore ay degmadaasi ka dhaceen falal lidi ku ah ammaanka halkaas.